Soo dejisan Teamviewer 15.14.5 – Windows – Vessoft
TeamViewer – software ah in meel fog laga heli computer ka meel kasta oo internet-ka. software waxaa loo isticmaalaa taageerada interactive of debugging iyo dayactirka kombiyuutarka fog. TeamViewer u saamaxaaya in ay wadaagaan files ka, ay ku chat iyo diyaarin soojeedin. software waa ay awoodaan in ay ku kaydiso goobaha xidhiidhka ka si gooni gooni ah, waayo computer kasta. software waxay leedahay interface ah dareen leh oo fudud si ay u isticmaalaan.
taageero la ballaariyay ee kormeerayaasha badan
kala iibsiga File iyo chat
Lacag u ah goobaha si gooni gooni ah, waayo computer kasta